Orinasa mpanamboatra posture - Mpanamboatra mpanamboatra akora posture any Sina, mpamatsy
Fanohanana aforitra vy
Ny fanohanana ao ambadika dia fanoratana misokatra, mora ny mitafy, habe maimaimpoana ka azon'ny ankamaroan'ny olona mampiasa azy io. Izy io dia afaka mametaka ireo lamba mafana. Lamba vita amin'ny kalitao avo lenta, avo roa mitarika Y cross, kady matevina ary tadivavarana, vy vy any an-damosina ao aorinan'ny fanohanan'ny lamosina mahatonga ny hazondamosinao mahitsy. Ny endrika famoronana ergonomika dia asiana fehin-kibo azo atao ary misy fehikibo amin'ny fehikibo ahafahana manao fanao farany farany.
Ity vokatra ity dia ampiasaina hanatsarana ny toe-pahasalaman'ny fihazana na ny tsy fahatomombanana amin'ny làlan'ny vertebra Ny fampiasana fehikibo miendrika karazana sy lamba vita amin'ny rivotra, ary tsy mitovy amin'ny braces hafa, ity no mampiavaka ny famolavolana iraisana, mihetsika amin'ny lamosina rehetra, miharihary kokoa ny fiantraikany. Ary novolavolaina araka ny ergonomika ny olombelona, ​​ny compact mifanaraka amin'ny endrika vatana.